Xog: Taliyihii ay la socodka amnigooda u magacaabeen midowga musharaxiinta oo la ogaaday inuu la shaqeeyo NISA – Hornafrik Media Network
Xog: Taliyihii ay la socodka amnigooda u magacaabeen midowga musharaxiinta oo la ogaaday inuu la shaqeeyo NISA
By Liibaan Nuur	 On Dec 7, 2020
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in midowga murashaxiinta qarka u fuuleed in ay teliye amni u magacowdaan Sarkaal xiriir dhow la leh waaxda dabagalka hay”ada NISA.
Sarkaalkan oo magaciisa lashaacin ayaa dib laga ogaadey in uu lashaqeeyo Teliyaha Hogaanka Dabagalka NISA Cabdalla Daahir Cabdalla isla markaana u gudbin jirey xogaha muhiimka ah ee midowga murashaxiinta is weedaarsadaan sida aan kasoo xiganey ilo xog ogaal ah.
Arintaan ayaa muujineysa in Hay”ada NISA ay ku dhexmilantey kooxaha mucaaradka ah.
Dhinaca kale Taliyaha NISA Fahad Yaasiin , ayaa cudur daar ka Bixiyay Safarkiisii baaqday ee uu ku aadi lahaa dalka Qadar, isagoona habeen isniinta lasoo dhaafey saaxiibadiisa u faahfaahiyey ujeedada safarka fashilmey ugu socodey;
Teliya Abdullahi Aadan Kulane ayaa ku teliyey in Teliye Fahad Yasiin uu is Casilo isagoona ku sababeeyey in teliyaha NISA dhawaanahan lasoo baxey dabeecado aan lagu aqoon isla markaana aad isku wacaan musharaxiinta mucaaradka qaarkood waa sida hadalka u dhigeye.
Taliyaha Dabagalka ayaa lasheegey in arintan uu ka biya diiday isaga oo muujiyey in laga haboon yahay in xilagan la kala Jabo.
Dhanka kale kulan gaar ah oo dhex marey Taliyaha Dabagalka iyo MD Farmaajo ayaa diirada lagu saarey sidii laga yeeli lahaa arimaha Jubaland MD Farmaajo ayaa aaminsan in xoog ciidan loo isticmaalo walow Teliyaha Dabagal lasheegey in uu diiday in jubalad la weeraro xiligan ayna muhiim tahay in lawada hadlo.
Xog hoose oo aan helney ayaa muujineysa in kulanka uu kusoo dhamaaday natiijo la’aan
Teliyaha Dabagalka ayaa dhawaanahan lagu tilmaamayey in uu kamid ahaa dadka sida dhow ula shaqeeya MD Farmaajo Taliyaha Dabagalka abdullahi Daahir abdullahi iyo farmaajo hadey is khilaafaan ayaa la aaminsanahay in mucaaradka awood badan heli karaan.
Ugu danbeyn Taliyaha sirdoonka gobolka banaadir yaasiin Fareey ayaa wada olole uu ku raadinayo xildhibaanimo.
Xaruumaha Hay”ada NISA ayaa isku bedeley xaruumo olole loogu sameeyo siyaasiyiinta qaar isla markaana lagu caburiyo qaar kale.
Daawo: Midowga mushariinta oo war ka soo saaray xaaladihii u dambeeyey ee dalka
RW Rooble oo shaaciyey in madaxda DF iyo DG ay isugu imaan doonaan shir kale oo wada-tashi ah